"दशरथ चन्द" का संशोधनहरू बिचको अन्तर - विकिपिडिया
"दशरथ चन्द" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
दशरथ चन्द (सम्पादन गर्ने)
२१:२३, २ मे २०२१ जस्तै गरी पुनरावलोकन
९२ bytes added , ४ महिना पहिले
१०:१४, २० डिसेम्बर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
सा (clean up, replaced: ==बाह्य लिङ्कहरू== → ==बाह्य कडीहरू== स्वतःविकी ब्राउजर प्रयोग गर्दै)
२१:२३, २ मे २०२१को रुपमा हालको पुनरावलोकनहरू (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
[[File:Dasarath chanda.jpg|thumb|200px|right|शोभा भगवतीमा रहेको शहीद दशरथ चन्दको प्रतिमा]]
'''दशरथ चन्द'''को जन्म वि.सं. १९६० असार १७ गते [[बैतडी जिल्ला]]को बस्कोटमा पिता शेरबहादुर चन्द र आमा ओजकुमारी चन्दको कोखमा माहिला छोराका रूपमा भयो। शहीद माइला भन्नाले दशरथ चन्द बुझिन्छ। उहाँमा पितालाई [[सुर्खेत जिल्ला|सुर्खेत]]मा टुँडिखेल बनाउने लेफि्टनेन्ट शेरबहादुर चन्दका नामले चिनिन्छ। राणाशासनका विरोधीहरूमा सबैभन्दा सशक्त व्यक्तित्व स्व. चन्दले मानविकी तथा समाजशास्त्र विषयमा [[वाराणसी|बनारस]]बाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। त्यसअघि उहाँले [[नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका|नेपालगञ्ज]], [[अल्मोडा]], [[कुमाउँ]], [[नैनीताल]] जस्ता ठाउँमा पढनुभयो।
==राजनैतिक विकास ==
त्यहीबेला उहाँ काशी नागरिक प्रचारिणी सभामा रहेर राजनीति गर्न थाल्नुभयो। [[महात्मा गान्धी]]ले [[भारत]]मा प्रारम्भ गर्नुभएको सत्याग्रहमा उहाँले सक्रियरूपमा भाग लिनुभएको थियो। वि.सं. १९९० साल [[बारा जिल्ला]]को मौवादहमा [[टङ्कप्रसाद आचार्य|टंकप्रसाद आचार्य]]सँग दशरथको पहिलो पटक भेट भयो। वि.सं. १९९१ मा उहाँ सहयोगी शिवदत्त भट्टका साथ बर्मा पुग्नुभयो। त्यसपछि [[थाइल्यान्ड|थाइल्याण्ड]] पुगेर नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने योजना बनाउनु भयो। उहाँ नेपाल प्रजापरिषद्को कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सेवासिंह भन्ने छद्मनामबाट राणा विरोधी लेख छाप्नुहुन्थ्यो। दशरथ चन्द र [[गङ्गालाल श्रेष्ठ]] एउटै जेलको कोठामा पर्नुभएको थियो। तत्कालीन राणा सरकारले वि.सं. १९९७ माघ १५ गते दशरथ चन्दलाई [[शोभा भगवती]]मा गोली हानी मृत्युदण्ड दियो। उहाँ अविवाहित नै शहीद हुनुभयो। दशरथका जेठा बुबा रबी चन्द र कान्छा बुबा सुबेदार दलबहादुर चन्द थिए भने माइलाका दाइ गोकर्ण चन्द थिए। भाइ ललित चन्द पनि २०५१ सालमा बिते। चश्मा लगाउने दशरथ चन्द गाउँमा प्रत्येक घरमा जानुहुन्थ्यो। दिदी, बहिनी, भाउजूहरूसँग ख्याल-ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई भोक लागेमा जुन घरकी भाउजूसँग पनि मागेर खान हिच्किचाउनु हुन्थ्यो। मोही दशरथलाई खुब मनपर्थ्यो।
==व्यक्तिगत जीवन ==
उहाँ अविवाहित नै शहीद हुनुभयो। दशरथका जेठा बुबा रबी चन्द र कान्छा बुबा सुबेदार दलबहादुर चन्द थिए भने माइलाका दाइ गोकर्ण चन्द थिए। भाइ ललित चन्द पनि २०५१ सालमा बिते। चश्मा लगाउने दशरथ चन्द गाउँमा प्रत्येक घरमा जानुहुन्थ्यो। दिदी, बहिनी, भाउजूहरूसँग ख्याल-ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई भोक लागेमा जुन घरकी भाउजूसँग पनि मागेर खान हिच्किचाउनु हुन्थ्यो। मोही दशरथलाई खुब मनपर्थ्यो।
बनारसमा स्नातक सकेर आउनु भएका युवा दशरथको विवाह [[काठमाडौँ|काठमाडौं]]को राणा खानदानकी जुलिया मैयासँग गर्न भनेर दुईपटक जन्ती गए तर केटीको परिवारमा 'जुठो सुत्केरो' परेकाले विवाह हुन सकेन, जन्ती रित्तै फर्क्यो।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/1001701" बाट अनुप्रेषित